October 18, 2020 - Padaethar
သင့် နာမည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ဘာနဲ့စလဲ…အရမ်းမှန်လို့ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်မိတယ်
October 18, 2020 by Padaethar
နာမည်ကျော် စိတ်ပညာရှင် Sylvia Browne ကတော့ သင့် နာမည် ရဲ့ အစစာလုံး ကရည်ညွှန်းတဲ့ သင့် အကြောင်း ကို ပုံဖေါ်လိုက်ပါပြီ။ သင့် နာမည် ကို အင်္ဂလိပ်ဘယ်စာလုံးနဲ့စပါသလဲ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ၂၆ လုံးရှိပေမယ့် မြန်မာ အများစု ပေါင်းတတ်တဲ့ စာလုံးတွေကိုပဲဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ A နဲ့စတဲ့သူ – လွတ်လပ်မှု ကို အင်မတန်လိုလားပြီး၊ သူအလိုရှိတဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ သတိ၊ စွမ်းအား တွေနဲ့ ပြည်စုံတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝတစ်လျှောက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေရှိတတ်တယ်။ သူ့ပန်းတိုင် ရောက်ဖို့ ကူညီထောက်ပံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ B- ပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့ စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိုယ်အတွက်ထက်တပါးသူအတွက် ပဲ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လုပ်တတ်တယ်။ အချက်အပြုတ်ကောင်းပြီး ဖော်ရွေတယ်။ နာကျင်ထိခိုက်လွယ်သလောက် … Read more
ကိုယ်ချစ်သူကို တစ်ချိ်န်လုးံစိတ်မချဖြစ်သူများ အတွက်..(သင့်ချစ်သူဖုန်းကို သင့်ဖုန်းကနေ ခိုးကြည့်နည်း )
ကိုယ်ချစ်သူကို တစ်ချိ်န်လုးံစိတ်မချဖြစ်သူများ အတွက်..(သင့်ချစ်သူဖုန်းကို သင့်ဖုန်းကနေ ခိုးကြည့်နည်း ) သင့်ချစ်သူ ဖုန်းဘေးကအသံတွေကို သင့်ဖုန်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ပြီးအသံဖမ်းခိုးနားထောင်မယ် သင့်ချစ်သူဖုန်းကို ဘယ်သူတွေ မက်ဆေ့ပို့ လဲ သင့်ဖုန်းကနေကြည့်မယ် …. သင့်ချစ်သူ ဘယ်သူနဲ့ ဖုန်းပြောလဲ သင့်ဖုန်းကနေခိုးနားထောင်မယ် သင့်ချစ်သူကို ဘယ်သူတွေ ဖုန်းဆက်လဲ ဖုန်းနံပါတ်တွေ သင့်ဖုန်းကနေကြည့်မယ် … သင့်ချစ်သူဖုန်း Wifi နဲ့အင်တာနတ်လိုင်းကို သင့်ဖုန်းကနေ အဖွင့်အပိတ်လုပ်မယ် သင့်ချစ်သူဖုန်းကို သင့်ဖုန်းကနေ ထိန်းချုပ်ပြီး Lock ကျပစ်မယ် … သင့်ချစ်သူဖုန်းမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှအရာတွေကို သင့်ဖုန်းကနေ ခိုးကြည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်းဖိုးရှိတဲ့ နည်းပညာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာက ဘာမှမခက်ခဲပါဘူး … သင့်ချစ်သူဖုန်းထဲကို ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုထဲပြီး Gmail တစ်ခုကိုထည့်ပြီး ဆော့ဝဲလေးကိုဖြောက်ထားယုံပါဘဲ။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်ကအချက်အလက်တွေအပြင် အခြားအချက်အလက်တွေကို … Read more
Categories ဘဝနှင့် ပညာပေး
ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် မယုံသင်္ကာဖြစ်လာမိရင် ဒီအချက်(၇)ချက်ကို အရင်လုပ်ဆောင်ဖို့လို
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး ခြေလှမ်းတွေ ပျက်နေတယ်လို့ ခံစားမိနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ ထင်နေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး သင်အနေနဲ့ သူ့ Facebook ကိုပဲ ၀င်ကြည့်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘာများထူးခြားတာ တွေ့ပါသလဲ။ ဘာရယ်မဟုတ် တခြားကောင်မလေးတွေရဲ့ပို့စ်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူ Like လုပ်ထားတာ၊ ကွန်မန့်ဝင်ပေးထားတာမြင်ရင် သံသယတွေက ပိုကြီးတော့မှာပေါ့။ ဒီတော့ ဒီနည်းတွေထက် သင့်ကိုအဆင်ပြေသွားစေနိုင်သလို၊ နှစ်ဦးသားပြန်အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ သင့်စိတ်ကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီ (၇)ချက်အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ပါတော့…. ၁။အခင်မင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းကို ခေါ်လိုက်ပါ… ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းတွေဖွင့်ဟဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ခုချိန်မှာ သင့်ချစ်သူက နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာလား၊ သေချာရဲ့လား မသိရသေးခင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီအကြောင်းတွေ ပြောနေဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် တခြားသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ … Read more
ချစ်သူကိုမြင်တွေ့ချင်တဲ့ သင့်စိတ်ကို ပြုပြင်ဖို့ တွေးသင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
ချစ်သူ ကို စက္ကန့်မလပ်မြင်တွေ့ချင်တဲ့ သင့်စိတ်ကို ပြုပြင်ဖို့ တွေးသင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက် လူတစ်ယောက်ကို မခွဲနိုင်အောင် ချစ်မိတာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ မျက်လုံးနှစ်လုံး ပွင့်ချိန်ကစပြီး ပိတ်ချိန်အထိ ချစ်သူကို မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် အမြဲတမ်း တွေ့ချင်စိတ်မျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူ့ကို ချစ်တာနဲ့ သူ့ကို အမြဲတမ်း မြင်ချင်တာ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာ နှစ်ဦးစလုံးမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ၁။ ခွဲခွာချိန်လေးတွေက အချစ်ကို တိုးပွားစေတယ် ဝေးလေလေ ပိုချစ်မိလေလေဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပေါ့။ ဝေးကွာနေချိန်မှာ သူ့ကို လွမ်းနေလိုက်ပါ။ ၂။ ကိုယ်ပိုင်ဘဝဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိသင့်တယ် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အလုပ်တွေနဲ့ ဝါသနာတွေ ရှိရပါမယ်။ အဲဒီလို … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောက်က်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ …
ချစ်သူ တွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အဆင့် ၇ဆင့်ရှိသတဲ့ ဖတ်မိတာတော်တော်သဘောကျလို့သူငယ်ချင်းလည်းဖတ်ရအောင်ဝေမျှတယ်တိုက်ကြည့်ရအောင်နော်… အဆင့် ၁။ အရူးအမူးဖြစ်ကြတဲ့ အဆင့် ဒါကတော့ ချစ်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး အဆင့်ပါ။ဒီအဆင့်မှာ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြစ်မမြင်ကြဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲ ကွက်မြင်ကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့။ အဆင့် ၂။ နားလည်မှုရလာတဲ့ အဆင့် ဒီအဆင့်မှာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိလာကြပြီ။ ညဘက်တွေဆို ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်။ မိသားစုအကြောင်းတွေ၊ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေ၊ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောမယ်။ ပြီးရင် ချစ်သူဆီကလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် ချိုမြိန်နေမယ်။ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေပေါ့။ အဆင့် ၃။ အနှောင့်အယှက်ဝင်တဲ့ အဆင့် ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပြသနာလေးတွေ နည်းနည်းစလာပြီ။ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဦးဆုံး ရန်စဖြစ်ကြတဲ့အချိန်လေးတို့၊ စကားများပြီး စိတ်ကောက်ကြတဲ့အချိန်လေးတို့ကို ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် … Read more
ဓာတုဆေးသုံးပြီး၊ အပူပေးပြီး ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းက ပျိုမေတို့ဆံကေသာကိုခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေတဲ့အပြင် ဆံသားကိုပြောင်းသွားစေတာမျိုး၊ ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်ပြီး ပါးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်စေတာကြောင့် ခဏခဏဆံပင်ဖြောင့်လို့မကောင်းဘူးနော်။ ဒီတော့ ဓာတုဆေးမသုံး၊ ဖြောင့်စက်မလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ကြက်ဥအကာနဲ့ဒိန်ချဉ် ကြက်ဥအကာတစ်လုံး၊ ဒိန်ချဉ်နှစ်ဇွန်းတို့ကိုရောမွှေပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ကြာရင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးချပြီး ခေါင်းပြန်လျှော်ပေးလိုက်ကာ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အခါ ဘီးအစိပ်လေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရုံနဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ဆံကေသာကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ (၂) ငှက်ပျောသီးနဲ့ပျားရည် ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကို သမအောင်မွှေလိုက်ပြီး ဆံပင်အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ပဲခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပြီး ဘီးလေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရင် ဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းသွားပြီး အစိုဓာတ်လည်းပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။ (၃) အုန်းဆီနဲ့ပျားရည် အုန်းဆီနှစ်ဇွန်းနဲ့ ပျားရည်နှစ်ဇွန်းဆတူရောပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပေးပြီး သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ဆံပင်သားလေးတွေ သိသိသာသာနူးညံ့ပြီးဖြောင့်စင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (၄) အုန်းနို့နဲ့လိမ္မော်ရည် အုန်းနို့အနည်းငယ်ကို ခွက်ထဲထည့်ကာ လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို အရည်ညှစ်ထည့်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ … Read more
အတိတ်ဘဝက ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်၍ အမြွှာမောင်နှမကို မိဘများကလက်ထပ်ပေး
အတိတ်ဘဝက ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်၍ အမြွှာမောင်နှမကို မိဘများကလက်ထပ်ပေး ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သုံးနှစ်အရွယ်သာရှိသေးသော အမြွှာမောင်နှကို ယခင်အတိတ်ဘဝက ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီး မိဘနှစ်ပါးက လက်ထပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ပွဲကို အမှန်တကယ်မင်္ဂလာဆောင်သည့်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဧည့်ပရိသတ်အချို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက်ကလည်းမပြည့်သေးသလို မောင်နှမလည်း ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေသလို စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အမြွှာမောင်နှမရဲ့ မိဘတွေကတော့မိမိသား သမီးနှစ်ဦးသည် အတိတ်ဘဝတွင်ချစ်သူ များဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း အဖြစ်ဆိုး ကြောင့် တစ်ကွဲတပြားစီ ဖြစ်သွားခဲ့ရ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုဘဝတွင် အမြွှာ အဖြစ်ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊၎င်းတို့လက်မထပ်ပါက တစ်ဦးဦးသည် သေဆုံးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ယခုဘဝတွင်လည်း တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး မေတ္တာရှိနေသေးကြောင်း နတ်ဘုရားများ သိစေရန် လက်ထပ်ထိမ်း မြားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း … Read more